Mụbaa Mkparịta ụka site na Nzukọ Ndị Nleta Nzute
Mgbanwe: Zute Ebumnuche nke onye ọbịa gị
Mọnde, Jenụwarị 31, 2011 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
Ọ nwere ike ịdị ka ajụjụ doro anya, mana ọ bụ mgbe etinyere saịtị gị iji zaa ebumnuche nke ụdị onye ọbịa ọ bụla ị nwere ike ịgbanwe karịa. Ndị ọbịa ga-abịa na saịtị gị maka ọtụtụ ebumnuche:
Informationchọ Ozi - ma ndị ahịa ma atụmanya nwere ike ịchọ azịza ụfọdụ. Hà nwere ike ịchọta ha? Ọ bụrụ na ha agaghị, ha nwere ike ịkpọtụrụ gị ka ị mata azịza ha?
Discover - ọtụtụ oge ndị ọbịa ga-ada na saịtị ma ọ bụ blog gị n'ihi na ha achọpụtala gị. You na-akwalite saịtị gị nke ọma ebe nchọpụta ahụ mere?
Ikike Iwu - ndị ọbịa ga-alaghachi na-eche ma ị bụ ikike n'ezie na ụlọ ọrụ ahụ. Kedu ihe ị na-eme iji gosipụta ya?
Inweta Ntụkwasị Obi - ndị ọbịa nwekwara ike ghara ịgbanwe gị rue mgbe ha matara na ị nwere ntụkwasị obi. Kedu ụdị nghọta, njikọ, na netwọkụ ị na-akwalite?
Na-azụlite ya - nurturing na-achọ ihe niile dị n’elu mana na-enye ndị ọbịa ohere ịgbanwe na usoro iheomume ha na enyemaka gị. Have nwere mmemme ndị ọbịa nwere ike ịdenye aha maka ịzụlite?
Ntughari gi adighi eme na mgbe nile tinye na ụgbọ ibu bọtịnụ! Omume onye ọbịa na ntanetị dị mgbagwoju anya ma na-ewe ọtụtụ ụzọ site na saịtị gị gaa na ntụgharị. Iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị zuru ezu, ị ga-akwalite saịtị gị ebe a ga-achọta ya maka azịza (site na nyocha ọchụchọ), zụọ saịtị gị ebe a ga-achọpụta ya (Industrylọ ọrụ site na mmekọrịta ọha na eze na netwọkụ mmekọrịta), ga-ewulite ikike (site na ngosi, acha ọcha, ịde blọgụ na vidiyo), ma nye ụzọ nurtering na ntụgharị (email ma ọ bụ oku ekwentị).
Tags: Auditing ika
Ngwọta Njikwa Ọrụ Maka Ndị Ndụmọdụ
Ọrụ Email Dị Mfe Amazon - SMTP na Igwe ojii